फिट डाटा अधिक सटीक सर्वेक्षणमा आधारित छ - जिओफुमाडास
अप्रिल, 2010 अटोक्याड-Autodesk, cadastre, जीपीएस / उपकरण
यो एक सामान्य समस्याको उदाहरण हो, जुन अब मेरो साथ भइरहेको छ। मैले पहिले कम कम सही तरीकाको साथ सर्वेक्षण गरेको छ, सम्भवत GPS, टेप, र कम्पासको साथ। तथ्य यो हो कि कुल स्टेशन भेला गर्दा हामी बुझ्दछौं कि जानकारीले विरूपण ओगटेको छ।
मुद्दा यो हो कि यदि तपाईले बाह्य ठाडो उपाय मात्र लिनुहुन्छ भने, आन्तरिक समायोजन पागल छ।
आउनुहोस् कि यो AutoCAD सिविल 3D सँग कसरी गर्ने?
सरल, यो चयन गरिएको छ नक्शा> उपकरणहरू> रबर पाना
त्यसो भए कार्यक्रमले पोइन्ट्स सर्नको लागि अनुरोध गर्दछ र नियन्त्रण बिन्दुहरू सूचित गरिन्छ। अर्डर पहिलो बिन्दु हो जुन हामीलाई थाहा छ गलत छ (आधार बिन्दु), त्यसोभए तपाईमा जानुहुन्छ (सन्दर्भ बिन्दु).
जब सबै संकेत गरिएको छ, यो सकियो प्रविष्ट। त्यसोभएकार्यक्रमले हामीसँग समायोजन गर्ने वस्तुहरूको अनुरोध गर्दछ, गुणहरूको सबै सीमाहरू चयन गरिएका छन् र प्रविष्टि फेरि सकियो।
यहाँ यो भागमा जहाँ म माइक्रोस्स्टेसनको सम्झना छ, त्यहाँ त्यहाँ म सक्रिय आदेश रोक्न बिना स्तर बन्द वा स्तरहरू बदल्न सक्छु। यहाँ यो सम्भव छैन, म जुन विन्डोमा चयन गर्न चाहानु भएको छैन, बन्द गर्नु पर्दछ।
र त्यहाँ तपाईंसँग यो छ: अधिक चेकपोइन्टहरू, राम्रो। र पक्कै पनि त्यहाँ भोजहरूमा नोडहरू हुनुपर्दछ, ताकि टोपोलॉजिकल सफाई कायम रहनेछ।
यो स्पष्ट छ कि ठुलो कामका लागि यसलाई एकल स्ट्रोकमा गर्न सिफारिस गरिदैन, तर यसलाई ब्लकद्वारा गर्नुहोस्। कसरी गुण4र of को तल्लो भाग हेर्नुहोस्, किनकि त्यो शिरोबिन्दु लिइएको थिएन, पोइन्ट सर्दैन, यसले संकेत गर्दछ कि लाइनहरू लिनुपर्दछ वा म्यानुअल रूपले परिमार्जन गर्नु पर्छ यदि त्यहाँ ब्रेक छैन भने।
उपकरण धेरै व्यावहारिक देखिन्छ, माइक्रोस्टेशनले गरेको भन्दा बढि उपकरणहरू> ताना निर्देशांकहरू.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो जी! उपकरणहरू, बेन्टले नक्साको प्रयोगलाई सुधार्न
अर्को पोस्ट दायाँ माउस बटनअर्को »
एउटालाई जवाफ दिनुहोस् "अधिक सटीक सर्वेक्षणमा आधारित डेटा समायोजन गर्नुहोस्"
सिविल 2013 को कुन भाग माथि उल्लेख गरिएको आदेश हो ???
नक्शा> उपकरणहरू> रबर पाना
मैले योजना र विश्लेषण क्षेत्रमा यसको खोजी गरें ... तर मैले फेला पार्न सकिन
जवाफ दिनको लागि धन्यबाद